2013-03-03 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Converter - ON Saturday, March 09, 2013 No comments
ဒါလေးကတော့ Total Video Converter Update လေးပါ..။ ဖိုင်ဆိုက်ဒ်လေးကလဲ 10MB ပဲရှိပါတယ် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လေးနဲ့ Format တော်တော်များများကိုလဲ Convent လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်Video Converter လေးပါ အသုံးပြုမယ်ဆိုအောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားလိုက်ပါခင်မျာ.........
IN Design Tools - ON Saturday, March 09, 2013 No comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့ xara 3d maker6ဆော့ဝဲလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဆော့ဝဲလေးက3D နဲ့ စာလုံးလှလှလေးတွေကိုeffectလှလှလေးတွေနဲ့ရေးဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါအောက်မှာဒေါင်းယူသွား နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
Xilisoft Video Cutter v2.2.0 build 20120901 Full Version
IN Video Cutter - ON Saturday, March 09, 2013 No comments
ကဲ..မိမိလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Video Cutter လေးပါခင်မျာ..လိုအပ်သူများ
Download =>solidfiles / Dropbox
IN နည်းလမ်းများ, အထွေထွေ - ON Friday, March 08, 2013 No comments
မြန်မာဖောင့် ပြဿနာတက်သူတိုင်း ဒီဖောင့်လေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်လူအတော်များများ ဖြစ်တာတွေ့ တယ် ရေးလို့ ရပြီးEnter နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
လေးထောင့်ကွက်တွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတာ..။တချို့ ကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ရေးရင် လေးထောင့်ကွက်
နှိပ်လိုက်မှစာပေါ်တယ်ဆိုတော့ ဒီဖောင့်လေးကိုသုံးကြည့်စေချင်တယ်။ကဲ....အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ဆွဲသုံးကြည့်စေဖို့ ........။
မောင်တလုံးဆီက ဆွဲလာတာဗျာ.... သုံးကြည့်ကြနော်..
IN Converter - ON Friday, March 08, 2013 No comments
လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Audio Converter လေးပါ...လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ...
အရည်အသွေးမြင့်မြင့်နဲ့ Audio ဖိုင်တွေ ဖန်တီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Software ပါနော်.. Video Converter မဟုတ်ပါဘူးခင်မျာ..မှားမစိုးလို့ပါ ခင်မျာ...
Download>>>solidfiles (or) ziddu (or) sharebeast
IN Driver - ON Friday, March 08, 2013 No comments
Windows အသစ်ပြန်တင်လိုက်လို့ဖြစ်စေ...Driver တွေ Update လိုလို့ဖြစ်စေ..ပျောက်ဆုံး..လိုအပ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာ Driver တွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီး
မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Driver တွေကိုအင်တာနက်ကနေ အလွယ်တကူ Download
ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...ဒီ Software ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်Internet Connection ရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်...
လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို ရှာဖွေတော့မယ်ဆိုရင် မိမိကွန်ပျူတာကိုInternet အရင်ချိတ်လိုက်ပါ..ပီးရင် Software ကို Install လုပ်ပါ...ပြီးတာနဲ့ Scan နှိပ်ခါ မိမိကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်
Up To Date Driver တွေကို Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ..
Download>>>solidfiles (or) ziddu (or)sharebeast
IN USB Disk Security - ON Thursday, March 07, 2013 No comments
USB Disk Security ဆိုရင် တော်တော်များများသိကြပါတယ်..ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းထားသင့်တဲ့ ပါလေရာ ငပိချက်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်...Memory Stick , SD Card တွေကနေ Virus များ ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်လာခြင်းမှလည်း အမြင့်မားဆုံး ကာကွယ်ပေးပြီး..Antivirus များရဲ့ လက်တွဲဖော်ဆိုလ်လဲဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်အသစ်လေးထွက်လိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ....
Registry Easey 5.6 Full Versionနဲ့ ထင်းခွေရင်း ရွှေတူးကြမယ်
IN Cleaner - ON Thursday, March 07, 2013 No comments
Resgistry Easey ကိုသုံးပီး စက်လေး ရှင်းလိုက် အကောင့်လေး ဟက်လိုက်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ ကောင်းတာကတော့ မဆိုးပါဘူးလေ စက်ကိုပေါ့သွားရင် နဲ့ အကောင့်လေးတွေ မကြတာပေါ့ဗျာ အခုနည်းလမ်းကို အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သုံးရင်တော့ မိုက်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်လေးကစက်ကိုလဲရှင်းရင် အကောင့်လေး မရင်နဲ့ မလို့ပါပဲ .... အောက်က ပုံကတော့ Serial Key ပါပဲ ...
ကဲ အရင်ဆုံး Software လေးကိုဖွင့်ပီးတော့ Scan Now လေးဘာလေးလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ Key တောင်းရင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ ... ဒါက တပိုင်းပေါ့ဗျာ စက်ကို ပေါ့အောင်လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းပါ ....
နောက်တပိုင်းကတော့ စက်မှာသုံးခဲ့တဲ့ Gtalk client password တွေ ကျန်တဲ့ Password တွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါပဲ Restart မချမခြင်းတော့ သိမ်းထားပေးမှာပါ ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု ခေတ် ဆိုင်တော်တော်များများက DeepFreeze တွေအုပ်ထားတော့ Restart ချပေးလိုက်တော့ ပျက်ကုန်တော့တာပေါ့ဗျာ .... အရင်ဆုံး ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ System Tools ကိုသွားလိုက်ပါ ပီးရင်တော့ Password Recovery ကိုသွားပီးတော့ Recover All Password ဆိုတာလေးကိုရွေးပီးတော့ Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ...
နှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ အောက်က အတိုင်းပါပဲ account : .... password : ... ဆိုပီးတော့ ပြပေးပါလိမ့်မယ် ...
အကုန်မပြောတော့ဘူးနော် အခုခေတ် မှာ ဟက်ကာ ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် အမြီး လေးကျွေးပေးတာပါ xP
Password : Kiddo Monstar
IN Blog ဆိုင်ရာ - ON Thursday, March 07, 2013 No comments
ဒီနေ့တင်တဲ့ ပို့(စ်)လေးကတော့ ဘလော့မှာ Scrolling Recent Posts သုံးချင်သူမိတ်ဆွေတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ သိပြီးကြသောမိတ်ဆွေတွေလည်း ရှိနိုင်သလို မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထပ်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီနေရာမှာ"http://trickmik.com/" မိမိ ဘလော့လိပ်စာထည့်ပေးလိုက်ပါ...
IN Burning - ON Thursday, March 07, 2013 No comments
Nero Burning ROM ဆိုရင်တော်တော်များများသိမှာပါ တော်တော်များများလည်း ခွေကူးတဲ့အခါ Neroအမျိုးစားကိုသာအသုံးများပါတယ် ဒါကြောင့် အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပ်ဒိတ်လေးတွေ့လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ........
IN Cleaner - ON Wednesday, March 06, 2013 No comments
2013အတွက် သေးသေးကွေးကွေး File Size အရွယ်အစားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး..Cleaner Tools Functions အမြင့်ဆုံး. အစုံလင်ဆုံး သုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် Cleaner Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါ..Error Repair Tools ပေါင်းစုံပါဝင်လာတာကလည်း သုံးစွဲသူများအတွက်
အကြိုက်တွေ့ကြစေမယ့် အပြင်.ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ System ပေါင်းစုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ အမြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြင့်ရှင်းလင်းကာကွယ် ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ..Internet မြန်နှုန်းကို မြင့်တင်ပေးတဲ့ စနစ်ပါဝင်တာကလဲ..ပိုပြီးတော့တောင် ပြည့်စုံနေပါသေးတယ်..ကဲ..ပြောနေတာကြာပါ
တယ်..လက်တွေ့သာစမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ...Computer System ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာနေသူများနှင့်
Virus မရှိသော်လည်း ကွန်ပျူတာလေးးး နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက် အထူးစပါယ်ရှယ်ကောင်းမွန်တဲ့
Cleaner Software များထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ..
လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်မျာ..
Download>>>solidfiles (or)dropbox (or)sharebeast
IN နည်းလမ်းများ - ON Wednesday, March 06, 2013 No comments
WinRar ဖိုင်ကို password နဲ့ သုံးချင်ပေမဲ့နည်းလမ်း မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်ကို folder တစ်ခုမှာအရင်ထဲ့ထားလိုက်ပါ ပြီးရင် အဲဒီ folder ကို
R-Click နိုပ်ပီး add to archive... ကိုနိုပ်ပါ
ပီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအဆင့်ဆင့်လုပ်ပါ advanced ပြီးရင် set password ကိုနိုပ်ပါ နောက် password
ထဲ့ပါ encrypt file name ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး OK နိုပ်ပါ ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပီ
ဒီကောင်လေးကတော့ စက်ထဲကို သွက်လက်မြန်ဆန်အာင်လုပ်ပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ error တွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်4MB ထဲဆိုတော့ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ သူအတွက်အဆင်ပြေမယ့် ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါစက်ထဲမှာ အခြားအမျိုးစား
မရှိခဲ့ရင် ဒီကောင်လေးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါ
IN Converter - ON Wednesday, March 06, 2013 No comments
ဒီဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့ Video Converter လုပ်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ သူကတော့ ဖုန်းတွေမှာကြည့်လို့ရမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်အမျိုးစားတွေကိုအလွယ်ကူပြောင်းပေးတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
Run - gpedit.msc ရိုက်ထဲ့ပါ enter - Gropu policy box ကျလာလိမ့်မယ်။ Administrative Templates အောက်က system ကိုသွားပါ - “Turn off Autoplay” ကို Double click လုပ်ပါ Turn off
Autoplay on ” မှာ all dirves ကိုရွေးပြီး Enabled ပြောင်းလိုက်ပါ
Software မသုံးပဲ Folder ကိုလော့ချပြီး Delete လုပ်လို့မရအောင်လုပ်နည်း
IN နည်းလမ်းများ - ON Tuesday, March 05, 2013 No comments
အရင်ဆုံး My computer ကိုဖွင့်ပြီး Tools menu အောက်က Folder options ကိုဝင်ပါ View Tab ရဲ့ အောက်ဆုံးက Use sinple file sharing
(Recommended) ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ် ပြီး ok နဲ့ထွက်ပါ။
ကိုအရေးကြီးတဲ့ Folder ကို R-click နိုပ်ပြီး Sharing and security ကိုဝင်ပါ Security Tab မှာ Advanced ကိုနိုပ်ပါ Inherit from parent the
permission entries that apply to child objects. Include these with explicitly defined here ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ
ွပြီးရင် Remove လို.ပြော။ Apply ၊ OK ၊ OK နိုပ်ပါ
ဒါဆို ကိုရဲ့ Folder ကို ဘယ်သူမှ ဖွင့်လို. မရတော့ပါဘူး Delete လဲလုပ်လို.ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကိုယ်ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်တော့ အဲဒီဖိုဒါပေါ်မှာ ညာဘက်ကလစ်ပြန်နှိပ် sharing and security ကိုဝင် Security Tab မှာ Advanced ကိုပြန်ဝင်
ပြီး Owner Tab ကို သွားပါ Administrator ပေါ်မှာ select မှက်ပြီး Reblace owner in subcontainers and objects ဆိုတဲ့စာကြောင်းကို
အမှန်ခြစ်ပြန်ထဲ့ပါ ပြီးရင် ok နဲ့ထွက်ပါ
ဒါဆို ok ပီပေါ့ဗျာ...........
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON Tuesday, March 05, 2013 No comments
IN Windows Repair, Windows ဆိုင်ရာ - ON Tuesday, March 05, 2013 No comments
Windows_Repair_All In One 1.9.11 ဟာ ကျွန်တော်တို့ အမှားအမျိုးအမျိုးကျူးလွန်လို့ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ ၀င်းဒိုးစနစ်တွေကို အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံး ပြုပြင်ဖာထေးပေးမှာပါ.. User ကြောင့်မှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Virus အမျိုးအမျိုးရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဘာကြောင့်ပဲ ပျက်ပျက်.. OS ကြီးတစ်ခုလုံး လည်ပတ်နေရုံလေးနဲ့ ဒီကောင်လေးကို Run လိုက်ပါ.. လုံဝမတက်တော့တဲ့ Windows တော့မရဘူးပေါ့ခင်ဗျာ..သူဆိုဒ်မှာရေးထားတာတော့အသစ်နီးပါးအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘဲ
အသုံးပြုမယ်ဆို ဒီမှာ လေ့လာပြီး အောက်ကလင့်မှာရယူနိင်ပါတယ် ခင်မျာ.........
download>>>solidfiles / sharebeast
AVCWare Video Converter Ultimate 7.7.2 Full Version
IN Converter - ON Monday, March 04, 2013 No comments
2013 ရဲ့ အသစ်ထွက် Video Converter Software ဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ..မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့
Popular အဖြစ် ဆုံး Format ပေါင်းစုံကိုပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်...လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီခင်မျာ..
IN Antivirus - ON Monday, March 04, 2013 No comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့ SmadAV 2013 full version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဆော့ဝဲလေးက 2013 Upload လေးမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဆော့ဝဲက ဗိုင်းရပ် တော်တော်များများကို သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲလေးကို Full version အဖြစ်အသုံးပြုဖို့ ရန် ( keygen ) ဖိုင်ပါထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆော့ဝဲကတော့အောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ 
Multi Virus Cleaner 2013 Portable
2013 မှာထွက်လာတဲ့ Virus Cleaner ဆော့ဝဲတစ်မျိုးပါ ဗိုင်းရပ်ပေါင်း15000 ကျော်ကို ရှင်းနိုင်ပြီး
အခြား Trojan , malware တွေကိုပါရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ ဗိုင်းရပ် ပြဿနာအမြဲကြုံတွေ့နေရသူ
Multi Virus Cleaner isafree, stand-alone utility used to detect and remove major viruses. It is notasubstitute for full anti-virus protection, but ratheratool to assist administrators and users when cleaning infected systems. Multi Virus Cleaner is regularly updated and can detect over 15,000 common viruses, worms, trojans and spyware (including all variants of the Sober, MyDoom and Bagle viruses).